२२ रुपैयाँका लागि किशोरीले बेच्छन् शरीर ! – Ujyaalo Patrika
२२ रुपैयाँका लागि किशोरीले बेच्छन् शरीर !
खाने सामग्री जुटाउनका लागि किशोरीहरू २२ रूपैयाँमै यौ’ न सम्बन्ध राख्न तयार हुन्छन् भन्दा तपाईंलाई विश्वास नलाग्न सक्छ। केही राम्रो आर्थिक अवस्था बनाएका महिलाहरू भने ७०–८० रूपैयाँसम्म पनि लिन्छन्।
यो अवस्था दक्षिणी अफ्रिकाका केही क्षेत्रमा छ। जो खाद्य संकटको सामना गरिरहेका छन्। रोयटर्सका अनुसार मानवीय आधारमा सहायता र्पुयाउँदै आएको अन्तर्रा्ष्ट्रिय संस्था वर्ल्ड भिजनले भोकमरीबाट ज्यान बचाउनका लागि अंगोलमा १२ वर्षदेखिका किशोरीहरू औसतमा ३० रूपैयाँमा यौ’ न सम्बन्ध राख्न बाध्य हुने गरेको बताएको छ।
राष्ट्रसंघका अनुसार दक्षिण अफ्रिकामा साढे ४ करोड मानिस भोकको समस्या झेलिरहेका छन्। यसका पछि लामो समयको खडेरी, बाढी र आर्थिक अवस्था जिम्मेवार छ।
वल्ड भिजनले आफ्ना कर्मचारीले अंगोला, जिम्बाब्बेमा देह व्यापार गर्ने किशोरीको संख्यामा वृद्धि भएको देखेको उल्लेख गरेको छ । संकटका कारण यी देशमा बालविवाहको खतरासमेत बढेको छ।
अंगोलमा वर्ल्ड भिजनका आपत्कालीन निर्देशक रोबर्ट बुल्टनले भने, ‘हुन सक्छ कि यहाँका युवतीहरूले यौ’ न सम्बन्धका लागि ७२ रूपैयाँ (स्थानीय मुद्रामा ५ सय क्वान्जा) पाउछन्। कतिपयले २९ रूपैयाँ (२०० क्वान्जा) मा पनि यौ’ न सम्बन्ध राख्छन्।
रोबर्टका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा कतिपय खाद्यान्नको मूल्य दुई गुणासम्म भएको छ। जसका कारण सर्वसाधारणलाई जीवन चलाउन अत्यन्तै कठिन भइरहेको छ। अब जूनभन्दा अघि त्यहाँ खाद्य बाली तयार हुँदैन । यसका कारण समस्या थप जटिल पनि बन्न सक्छ।
जिम्बाब्बेका बारेमा केयर इन्टरनेसनल संस्थाले १४ वर्षसम्मका युवतीहरू दे’ ह व्यापार गरिरहेको उल्लेख गरेको छ। संस्थाका क्षेत्रीय लैंगिक विशेषज्ञ एभरजोए महुकुले भने, ‘कतिपय अवस्थामा दे’ ह व्यापार गर्ने युवतीले २२ रूपैयाँ मात्रै पनि पाउने गर्छन्।’
एक्सन एडका क्षेत्रीय सल्लाहकार चिकोन्डी चबुवुताले मलावी र मोजम्बिकमा पनि युवती र महिलाहरूले जबर्जस्त दे’ ह व्यापार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
अफ्रिकाका केही क्षेत्रमा १९८१ पछि सबैभन्दा कम वर्षा भएको छ। जाम्बिया, मादगास्कर, नामिबिया, लेसोथो र इस्वातिनीजस्ता अफ्रिकी देशहरू यस प्रकारको संकटको सामना गरिरहेका छन्। – एजेन्सी
सडकमा छाडा कुकुरहरुको संख्या बढ्दै गएपछि बागलुङमा ब,न्ध्याकरण गर्न थालिएको छ ।
सडकमा रहेका छाडा कुकुरका कारण नागरिकहरुले समस्या भोगिरहनुपरेको एवं पछिल्लो समय सडकमा कुकुरको संख्या बढ्दै गएपछि दु,र्घटनाको जोखिम समेत बढेकाले बन्ध्याकरण गरी न्यूनीकरण गर्न बागलुङमा बुधबार र बिहीबार शिविर नै सञ्चालन गरिएको छ ।
कुकुरकै टोकाईबाट कयौँ घा,इते भएर पोखरा, काठमाण्डौँसम्म उपचार गर्न जानुपर्ने समस्या पनि देखिने गरेको छ । त्यसकारण ब,न्ध्याकरण शिविरमा रेबिज वि,रु,द्धको खोप पनि लगाइएको भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बागलुङले जनाएको छ ।
बुधबार मात्रै ७९ वटा छाडा तथा घरपालुवा कुकुरहरुको ब,न्ध्याकरण गरिएको छ । बरिष्ठ पशु चिकित्सक डा.शंकर पाण्डे, पशु चिकित्सक डा. अर्जुन अर्याल, डा. विकास गिरी, खितबहादुर श्रेष्ठ लगायत १० जनाको विज्ञ टोलीले शिविरमा सहजिकरण गरेको छ ।
एउटा शिविर सञ्चालन गर्दा दुई सय कुकुरको ब,न्ध्याकरण गर्ने योजना बनाइएको पशु चिकित्सक खितबहादुर श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठले भने, ‘एउटा कुकुरले वर्षमा दुई पटक मात्रै ब्यायो भने पनि एउटाले ६ वटा पाउछ, यस्ता कयौँ कुकुर सडकमा छन्, त्यसैले कुकुरको न्यूनीकरण भएपछि रेबिज रो,ग पनि घट्ने भएकाले यो अभियान सुरु भएको हो ।’
भुसिया कुकुरलाई न्यूनिकरण गर्न तथा सन् २०३० सम्म रेबिज उन्मुलन गर्नका लागि ब,न्ध्याकरण थालिएको श्रेष्ठले बताए । यस्तै पशु चिकित्सक डा.अर्जुन अर्यालले बन्ध्याकरण गर्दा कुकुरलाई केही समय पीडा हुने भएपनि लामो समय दुःखाई नहुने गरी औषधि दिने गरेको बताए ।
उनले एक दिनमा ६० भन्दा बढी कुकुरको ब,न्ध्याकरण गरेको समेत बताउछन् । कुकुरको बन्ध्याकरणको लागि यो समय उपयुक्त भएको बताउँदै घाउ पाक्ने सम्भावना नरहेको अर्यालले बताए ।
बागलुङमा ब,न्ध्याकरण शिविर सञ्चालन गर्नका लागि भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, केन्द्रीय रिफरल अस्पताल काठमाण्डौँ एवं बागलुङ नगरपालिकाको संयुक्त ५ लाख रुपैँया बिनियोजन गरेका हुन् ।
आफ्नो कुकुरलाई ब,न्ध्याकरण गराउन बागलुङ नगरपालिका–१३ पैयुँपाटाबाट आएका भोलानाथ रिजालले बन्ध्याकरण शिविर राखेर राम्रो काम गरेको बताए । धेरै कुकुर पाल्न नसकिने र रेबिज वि,रुद्धको ईन्जेक्सन लगाउने भएकोले आफुले कुकुर लिएर आएको रिजालले बताए ।
Next ‘१० वर्षसम्म आमाको श,वलाई फ्रिजमा लुकाउने’ जापानी महिला प,क्राउ : फ्रिजमा राख्नु अचम्मको कारण . .